Fivavahana ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô - Wikipedia
Ny fivavahana ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô dia ny fivavahan-drazana sy ny fivavahana kristiana ary ny fivavahana silamo. Ny Repoblikan’ i Kôngô dia firenena anjakan’ ny fampifangaroana fivavahana. Mihoatra ny antsasaky ny mponina manontolo no mitonon-tena ho Kristiana. Katôlika ny 35 % hatramin' ny 50 %n’ ny mponina, Prôtestanta ny 15 % hatramin' ny 20 % ary 15 % Kristiana hafa. Ny animisma sy ny fivavahan-drazana dia mbola be mpanaraka ao avaratra (50 %). Any amin’ ny faritry ny fatrana sy amin’ ny tanan-dehibe no ahitana ny fivavahana silamo (2 %).
1 Ny kristianisma
2 Ny fivavahana silamo
3 Ny kimbangisma
4 Ny fivavahan-drazana
5.1 Momba ny Repoblikan' i Kôngô
5.2 Momba ny fivavahana aty Afrika
Ny Kristiana no maro anisa. Araka ny filazàn' ny CIA World Factbook dia Katôlika ny 33,3 %n' ny Kôngôley, mpino ao amin' ny Fiangonana fifohazam-panahy ny 22,3 %, Prôtestanta ny 19,9 %. Araka ny Association of Religion Data Archives dia Katôlika ny 52,9 %, Prôtestanta ny 35,6 % (ka Pentekôtista ny 10,6 %, Prôtestanta ny 16,7 % ary 8,3 % ny Kristiana hafa).
Ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly tao amin' ny Repoblikan' i Kôngô dia nanomboka tamin' ny taonjato faha-19 nefa tamin' ny taonjato faha-20 vao tena niroborobo, na dia efa nisy ny fitoriana tany amin' ny faritra a-morontsiraka nandritra ny fanjanahan-tany nataon' ny Pôrtogey tamin' ny taonjato faha-15. Ny fiangonana fifohazam-panahy dia nandroso fatratra nanomboka tamin' ny ampahefany farany amin' ny taonjato faha-20 sady nitombo ny fidirany an-tsehatra amin' ny fiainanana aara-piarahamonina sy ara-pôlitika ao amin' io firenena io.
Ny ankabetsahan' ny Miozolmana miasa an-drenivoitra dia mpifindra monina avy any Afrika Andrefana sy avy any Libàna (na Libanona), izay ahitana olona avy any Afrika Avaratra koa. Ny mpifindra monina avy any Afrika Andrefana dia avy any Maly, any Benîno, any Tôgô, any Maoritania ary any Senegaly. Ny ankamaroan' ny Libaney dia Miozolmana sonita. Misy koa ireo izay manaraka ny fivavahana ahmadia izay sampan' ny fivavahana silamo ao amin' io firenena io. Araka ny filazàn' ny CIA World Factbook dia Miozolmana 1,6 %n' ny Kôngôley.
Ny kimbangisma[hanova | hanova ny fango]
Ao koa ireo Kristiana vitsy anisa manaka ny kimbangisma, izay fivavahana manambatra fombam-pivavahana sy finoana isan-karazany (sinkretisma) izay nipoitra avy ao amin' ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô mpifanila vodirindrina amin' ny Repoblikan' i Kôngô. Na dia mitazona singa avy amin' ny kristianisma aza ny kimbangisma dia manao an' i Simon Kimbango ho mpaminany sady mampiditra finoana nentim-paharazana afrikana toy ny fivavahana amin' ny razana.
Araka ny Association of Religion Data Archives dia manaraka fivavahan-drazana (animisma sy samanisma) ny 4,7 %n' ny vahoaka kôngôley. Tsy foana ireo fivavahan-drazana. Isan' ny antsoina ny fanahin'ny razana ho mpanelanelana, ka izy ireo no angatahana mba hahazoana torohevitra sy fahasitrananaa ary fahavokaran' ny fambolena.
Momba ny Repoblikan' i Kôngô[hanova | hanova ny fango]
Momba ny fivavahana aty Afrika[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fivavahana_ao_amin%27_ny_Repoblikan%27_i_Kôngô&oldid=1001263"
Voaova farany tamin'ny 10 Febroary 2021 amin'ny 04:32 ity pejy ity.